Ciidanka Badda Puntland oo gacanta ku dhigay doonyo sharci darro ah-CODAD & SAWIRO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Ciidanka Badda Puntland oo gacanta ku dhigay doonyo sharci darro ah-CODAD & SAWIRO
Ciidanka Badda Puntland oo gacanta ku dhigay doonyo sharci darro ah-CODAD & SAWIRO
March 9, 2019 - By: Abdirisak Faamoos
Doonyaha lagu soo qabtay howlgalka
Ciidamada badda Puntland ee (PMPF) ayaa ku guuleystay in ay gacanta kusoo dhigaan doonyo la sheegay in ay ahaayeen kuwa dadka lagu tahriibayo kadib howlgal ka dhacay xeebaha ku teedsan magaalada Boosaaso.
Doonyahan ay soo qabteen ciidanka ilaalada xeebaha Puntland ayaa tiradooda lagu sheegay 8 doonyood oo labo kamid ah ay yihiin nooca waa weyn ,waxaana sarakiisha ciidanka PMP-ta Puntland ay sheegeen in loo adeegsan jiray tahriibinta dadka.
Gen.Muxiyadiin Axmed Muuse Taliyaha ciidanka Booliiska Puntland oo goobjoog ka ahaa madal lagusoo bandhigayay doonyahan ayaa waxa uu tilmaamay soo qabashadda doonyahan ay qeyb ka tahay qorshe la doonayo in looga hortago tahriibinta dadka.
Waxa uu sheegay in howlgalkan lagu soo qabtay doonyahan sida sharci darrada ah dadka loogu tahriibin jiray uu qaatay mudo saacado ah ,ciidamaduna ay ku guuleysteen in ay gacanta ku dhigaan hub iyo dadkii watay doonyahan kuwaas oo uu taliyahu sheegay in sharciga la marsiin doono.
Taliyaha ciidanka Booliiska Puntland Gen.Muxiyadiin Axmed Muuse
Ciidanka Badda Puntland ee PMPF ayuu ku aamanay doorka ay ka qaateen soo qabashada doonyahana sharci darrada ah isagoona balan qaaday in la xoojin doono howlgalada lagula dagaalamayo tahriibka.
Ciidanka badda Puntland ee loo yaqaan PMPF ayaa inta badan u howlgala sidii baddaha Puntland looga ilaalin lahaa burcad badeeda iyo waxkasta oo khalkhal galinaya amaanka Badaha deegaanada Puntland sida ay sheegaan saraakiisha iyo hogaanka ciidankan.